Serivisy sy solontena amin'ny paositra China Post Solution. Sunson
Vahaolana fandefasana paositra
Fantatray tokoa fa ny vahaolana paositra no safidy voalohany indrindra ho an'ny orinasa e-varotra satria mankafy ny taha ambany. Mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpivarotra isan-karazany dia miara-miasa amin'ny paositra maro izahay tato anatin'ny taona maro ary manala hatrany ny serivisy ratsy indraindray. Ankehitriny ny sisa no tsara indrindra.
Ny China Post dia mizara ho parcels ambony sy parcels voasoratra anarana. Izy io dia serivisy parsela iraisam-pirenena ho an'ny fonosana milanja ambany noho ny 2GG. China Post sy ny Universal Post Union dia namolavola fantsona fandefasana mailaka manerantany izay afaka mahatratra ireo toeram-paositra isan-karazany any amin'ny firenena sy faritra 200 manerantany. Tombony amin'ny serivisy paositra any Shina: ara-toekarena sy takatry, manatratra izao tontolo izao, fahazoan-dàlana mety amin'ny fadin-tseranana, fiarovana ary fitoniana.
Ny fonosam-pahefana any Belzika dia mizara ho parcels express Belzika ary parcels manerantany Belzika, izay ho an'ny fonosana iraisam-pirenena milanja latsaky ny 2GG. Ny paikady milaza any Belzika dia azo alefa any amin'ny firenena maherin'ny 20 any Eropa, ary ny parlesel Belzika eran'izao tontolo izao dia azo alefa any amin'ny firenena maherin'ny 200 eran'izao tontolo izao, ny fangatahana fampahalalana dia azo anontaniana, tombony ho an'ny serivisy belza: fanamafisana ny fadin-tseranana any United Kingdom, tsia fitaterana faharoa any amin'ny firenena eropeana, andoavana isaky ny kilao, mety amin'ny paosy maivana sy madinidinika, azo ekena ho an'ny bateria anatiny / vokatra bateria manohana, ary io no serivisy ankafizinao indrindra amin'ny fandefasana eoropeanina lafo vidy.
Postnl fantsona kely parcel dia serivisy parcel express eropeana natokana manokana ho an'ireo mpivarotra e-commerce cross-border, miorina any Netherlands, mamelatra ireo firenena eropeana iray manontolo, miantehitra amin'ny tambajotram-pahefana holandey sy ny rafitra fahazoan-dàlana mahomby, hamoronana faritra isaly avo lenta serivisy parcel, tombony amin'ny serivisy paositra holandey: vidin'ny tombam-bidy, fametahana ara-potoana maharitra, mety amin'ny fonosana maivana sy kely ary afaka manaiky vokatra misy batterie namboarina.
Ny Swiss Post dia mizara ho faritra parcel sy fantsona parcel voasoratra anarana. Izy io dia ny paositra 5 ambony indrindra ao amin'ny UPU ary sampana paositra mandroso indrindra any Eropa. Manana sampana saika amin'ny firenena rehetra izy ary manana fahaiza-manao fanodinana mailaka matanjaka. Tombony amin'ny serivisy: fahazoan-dàlana mety amin'ny fadin-tseranana, faharetan'ny fotoana maharitra, tombony ara-toekarena, mety amin'ny paosy maivana sy kely ao anatin'ny 2KG.